Nilaza izy fa ilay politikam-panjakana hiadiana amin'ny tsimokaretina no tsy dia mazava hatrany am-piandohana. Ny nahamaika dia nihazakazaka hanamboatra orinasa lehibe aty Afrika, ny hanovà ny tantaran'izao tontolo izao araka ny faminanian'i Johanna. Ny fanapahan-kevitra rehetra teto dia ny mpitondra no nandidy nanapaka saingy ny mpanohitra nangataka ny mangarahara toa tsy nohenoina, hany ka ilay fahamehana lasa toy ny didy jadona. Namafisiny hatrany fa tsy ny fividianana “test” sy ny fitiliana maro ankoatra ny nomen'i Jack Ma no laharam-pahamehana. Tsy ny fanafarana ny fitaovana mifandraika amin'ny fisorohana sy fitsaboana no natao vaindohan-draharaha. Ankoatra izay ny fahadisoana teo amin'ny fanentanana toy ny filazana fa "tsy mafy noho ny kolera sy pesta io, tsy mafy noho ny krizy 2002, sady misoroka no mitsabo ilay tambavy" hany ka nahatoky tena ny vahoaka ka tsy natahotra ny aretina intsony. Notsipihany hatrany fa tsy tokony azera fotsiny any amin'ny vahoaka ny tsiny hoe mafy loha. Antony, tsy mafy loha ny vahoaka fa mafy ady ary mbola miady mafy amin'ny fiainana.